को जोस: नयाँ कागजातहरू र दृष्टिकोण - वकिल फिलिपिन्समा! फिलिपीन वकिल, सबै अनलाइन.
को जोस: नयाँ कागजातहरू र दृष्टिकोण
केही अनुसार, जोस, थियो जो द्वारा मारिनुभएका को स्पेनी, एक नायक भएको छ किनभने आफ्नो लेखे नष्ट गर्न को विचार र मुक्त गर्नु मन फारम देश मलाई र एल र आफ्नो पुस्तक मा निबन्ध, भन्ने दृढ विश्वास हो नदेखिनेसेतो अमेरिकी, विशेष गरी पालन गर्न इच्छातर, केही समय अघि उहाँले, गोली हस्ताक्षर गरेर यो दस्तावेज भन्छन् कि उहाँले कच्चा एक क्याथोलिक र उहाँलाई सबै आफ्नो लेखहरू विरुद्ध चर्च । पहिचान कागजात रूपमा, किनभने आफ्नो रूपान्तरण गर्न, चर्च विवाह तिनीहरूले को ब्रेकन, आफ्नो अन्तिम प्रेम । केही अनुसार, यो झन् भए ठूलो आफ्नो को पहिचान मा त्रुटिहरू विरुद्ध विश्वास । तर धेरै लागि, छैन पत्यार पार्र्ने मा आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षण, उहाँले स्मरण गर्नु आफ्नो लेखहरू, को कारण उहाँलाई यसको नायक हो । त्यसको लागि उहाँले पनि वेवास्ता. पनि फेला भने कागजातहरू को मा, जारी पक्कै छ । विशेष गरी छलफल गर्न अद्वितीय प्रत्यक्षसाक्षी खाता को घटना द्वारा लिखित आधा-बुबा. कसरी हामीलाई सबै को, को उचित थियो अचानक जागा धेरै पटक, चार पटक, पछि, र अझै छ । अजीब लागि केही सहित, मलाई । म एक थियो ती इतिहासकारहरूले भनेर विश्वास छैन. र मेरो लागि, समाप्त छैन"विवाद छ ।"एक मात्र यो, म भन्नुभयो भने त्यहाँ हुनेछ अर्को प्रत्यक्षसाक्षी खाता को रात र बिहान गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि वा खण्डन वा गवाही बुबा. मा कागजातहरू को जासूस स्पेनी भनिन्छ पहिले नै एक सरकारी, फेला रिपोर्ट लिखित दिनमा मृत्यु गरेको, कि को प्रकाश उहाँलाई को एक एजेन्ट को पहिले देखि नै एक सरकारी, एक गार्ड मा सेल को, त्यसैले, एक"थप स्वतन्त्र प्रत्यक्षसाक्षी खाता ।"बयान अनुसार, लेख्न थियो एक भूमिका उहाँले सुने. पनि उल्लेख दुई पूजाहारीहरू मा प्रवेश गर्न बुबा जोस र बुबा मार्च, र दुई अन्य मान्छे थिए, र. र रिपिङ, जो सबै मा प्रवेश गर्दै छन् सेल त्यो रात, न त कहिलेकाहीं, त्यहाँ छ कुनै उद्धृत पाद्री. केही अर्थ छ पाद्री त्यहाँ सक्छन्, माध्यमिक स्रोत मात्र उहाँले र अन्तरवार्ता मात्र बुबा र बुबा मार्च निर्माण गर्न आफ्नो गवाही छ । म एक विशाल भन्ने विश्वास गर्न कुनै कारण छ गर्न झूठ गार्ड वा विशेष गरी र तिनीहरूले गरे को नोट मा ठीक छ कि समय । हाल, एक प्रतिलिपिद्वारा लिखित थमस á बायाँ गर्न को निर्देशक को राष्ट्रीय संग्रहालय, फिलिपिन्स, जेरेमी. यो धेरै प्रतिलिपि दिएको संग ब्रेकन मा आफ्नो अन्तिम भ्रमण यहाँ को दिन मा आफ्नो मृत्यु । उहाँले यहाँ लेखे,"मेरो प्रिय र दुःखी पत्नी, डिसेम्बर, जोस."बाहेक उहाँले भनिन्छ"पत्नी"वा पत्नी यहाँ, हुन सक्छ कि, को वैधता आफ्नो विवाह, धेरै पुस्तक उहाँले दिनुभयो अन्तिम महिला उहाँले प्रेम थियो बारे एक पुस्तक. यो क्रस विश्वव्यापी प्रतीक मसीही छ । मलाई सम्झाए.
फिलिपीन सामान्य विश्वविद्यालय मा दुई लेखहरू को पहिले मर्न उहाँले बताउनुभयो को यो प्रतीक हो । आफ्नो अन्तिम निर्देशन परिवार भनेर तिनीहरूले प्राप्त छैन सम्म मा (को पत्र को भाग हुनेछ दान स्पेनी विदेशी मन्त्री अल्बर्टो मार्टिनेज अल्वारेज मा फिलिपीन सरकार):"मलाई मुर्दा गाड्नु मा जमीन छ । जाँच तपाईं को एक पत्थर र पार । मेरो नाम, दिन को जन्म र मृत्यु । अन्य कुनै पनि छ । तपाईं त गर्न चाहनुहुन्छ यार्ड मेरो चिहान, तपाईं लिन सक्छ.
कुनै अधिक वार्षिकोत्सव । राम्रो भने खुट्टा को पहाड । कृपा तपाईं."आफ्नो अन्तिम कविता, उल्लेख गरे पनि को नाम समावेश क्रस मा आफ्नो गम्भीर दुई पटक । भने तपाईं यो हेर्न, दिन चाहन्छ एक मसीही दफन, मृत्यु, एक क्याथोलिक मसीही छ । त्यसैले बारी मा यो प्रकाश ल्याए गरेर नयाँ कागजात र नयाँ व्याख्या गर्न सक्छन्, त्यसैले जोस पनि थियो. गर्न सक्छन् साँचो त्यहाँ छ किन कारण, उहाँले यस्तो लेखे कागजात छ । तर यो साँच्चै छ भने यो साँचो हो । परिवर्तन प्रतिबद्धता र उपलब्धिहरू मा एक व्यक्ति को आफ्नो सारा जीवन को र साहस को एक कागज उहाँले थियो कि मा हस्ताक्षर को दिन आफ्नो मृत्यु ।.
डाउनलोड सामाजिक सुरक्षा नवीनतम संस्करण उपकरणहरू